Ihe ngosi ọhụrụ na-akwa emo onye ndu China Xi Jinping mepere na Italy
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » omenala » Ihe ngosi ọhụrụ na-akwa emo onye ndu China Xi Jinping mepere na Italy
Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ na -agbasa ozi China • omenala • Education • Entertainment • Akụkọ Ọchịchị • Ihe Ndị Ruuru Mmadụ • Akwụkwọ akụkọ Italy • News • ndị mmadụ • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
Ihe ngosi nka ohuru na-akwa onye ndu China emo meghere na Italy
Ndị ọrụ China gbalịrị itinye nrụgide n'obodo ahụ ka ọ kagbuo ihe omume ahụ - mana ndị nhazi gara n'ihu na agbanyeghị na nkwado 'ịkwado nnwere onwe ikwu okwu.'
Onye na-ese ihe na China bụ Badiucao na-akwa emo mgbasa ozi nke ndị Kọmunist Beijing na ihe ngosi ọhụrụ.
Ihe ngosi ọhụrụ na-akatọ mmegide ndọrọ ndọrọ ọchịchị na China na nyocha ndị China banyere mmalite nke nje COVID-19.
Tupu mmalite ihe ngosi ahụ, China gbara ndị ọrụ Italy ume ka ha ghara ikwe ka ihe ngosi ahụ gaa n'ihu.
N'ụlọ ngosi ihe mgbe ochie dị na Brescia dị n'ebe ugwu Italy na Satọde gara aga, ihe ngosi nka "China (adịghị) dị nso" nke onye na-ese ihe na-eme mgbanwe si Shanghai, Badiucao, meghere na ụlọ ngosi ihe mgbe ochie na Brescia dị n'ebe ugwu Italy.
A na-anụ kepu kepu na ihe ngosi a nwere ike ibute nnukwu mkparị diplomatic.
Onye na-ese ihe na-enweghị isi bụ onye ama ama maka ọrụ ya na-akatọ ndekọ ikike mmadụ nke China, ihe ngosi a abụghịkwa ihe ọzọ.
Otu n'ime ọrụ nka, nke na-egosi onye isi ala China Xi Jinping na Winnie na Pooh, akpasuola ndị ọrụ China iwe. Afọ anọ gara aga, àgwà Disney dabara na ndị ọchịchị China na netwọk mmekọrịta ndị China malitere ihichapụ foto nke Disney ngwa ngwa. Winnie na Pooh, n'ihi na ọ dị ka Xi Jinping.
Onye na-ese ihe nyekwara onye dọkịta China si Wuhan Li Wenliang ụtụ, onye bụ onye mbụ kọrọ akụkọ banyere ọrịa coronavirus site n'igosi ndị uwe ojii na-achụ ndị ngagharị iwe. Na otu n'ime akwụkwọ mmado mkparị maka asọmpi Olimpik Winter na-abịa, onye na-ese ihe na-egosi onye biathlete na-atụ égbè na-atụ onye mkpọrọ Uyghur kpuchiri anya.
N'akwụkwọ ozi o degaara onye isi obodo Brescia, ndị ọrụ nnọchi anya ndị nnọchi anya obodo China nke dị na Rome kwuru na ihe osise ahụ “jupụtara n'ụgha ndị China na-emegide” nakwa na ha “gbagọ eziokwu, gbasaa ozi ụgha, duhie ndị Ịtali ma kpasuo mmetụta ahụ nke ukwuu. nke ndị China."
Otú ọ dị, ndị isi obodo na ndị na-ahụ maka ihe ngosi nka, kwadoro atụmatụ maka ihe ngosi ahụ.
“A ghaghị m ịgụ akwụkwọ ozi a ugboro abụọ n’ihi na ọ tụrụ m n’anya,” ka osote onye isi obodo Brescia Laura Castelletti na-echeta, na-akpọ ya “mkpọchi” n’ime nnwere onwe ime ihe. Ọ gbakwụnyere, arịrịọ ka a kagbuo ihe ngosi ahụ, “nwetara nlebara anya karịa.”
"N'ihi na nka m na-elekwasị anya mgbe niile n'ihe gbasara ikike mmadụ na China ... ọ na-eme m ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụdị onye iro nke 1," Badiucao gwara ndị nta akụkọ.
"Onye ọ bụla nwara ikwu eziokwu ma ọ bụ akụkọ dị iche na akụkọ gọọmentị China ga-ata ahụhụ," Badiucao kwuru.
Ọ gbakwụnyere, "Ya mere, maka m, ọ na-esiri m ike ịme ihe ngosi na ụlọ ngosi ihe ngosi nke ụlọ ngosi ihe mgbe ochie."
Otu n'ime ọrụ ndị na-akpasu iwe bụ ihe osise ngwakọ nke Onye isi ala China Xi Jinping na Hong Kong Onye isi oche Carrie Lam - na-akọwapụta mbelata nke ikike na okpuru ọchịchị Britain mbụ.
E nwekwara usoro ihe osise 64 nke elekere nke onye na-ese ihe jiri ọbara nke ya kee. Ọrụ ahụ na-ezo aka elekere ndị agha China bụ ndị sonyere na mgbuchapụ Tiananmen Square na 1989.
Ihe ngosi a tinyekwara ngwaọrụ ịta ahụhụ nke emegharịrị ka ọ bụrụ oche na-ama jijiji. N'ime ụbọchị ole na ole mbụ nke ihe ngosi ahụ, Badiucao ga-anọdụ ala n'oche ịta ahụhụ wee gụọ ya site na akwụkwọ edetu nke onye bi na Wuhan zigara ya. Ọrụ ahụ na-akọwa ihe ndekọ ụbọchị 100 site na mmalite nke ọrịa ọrịa coronavirus.
Badiucao ghọrọ onye a ma ama na 2011 ka o bisachara eserese na Sina Weibo nke China jikwaa ihe mberede ụgbọ oloko dị elu na Wenzhou. A na-enyocha foto ndị a ọtụtụ ugboro, n'agbanyeghị na onye na-ese ihe bụzi nwa amaala Australia, ndị ọchịchị obodo ahụ ka na-awakpo ya. Na 2018, a kagburu ihe ngosi nke ọrụ ya na Hong Kong n'ihi "ihe nchekwa". Ndị nhazi ahụ kọwara mkpebi a site na "egwu ndị ọchịchị China", ma emesịa onye na-ese ihe kwuru na a na-eyi ndị ezinụlọ ya na China egwu.
Onye isi oche Board Tourism Board na Senegal na ozi dị mkpa
Njem nlegharị anya Jamaica na Grupo Pinero: Mkparịta ụka itinye ego na njem pụrụ iche